Amagilavu Men sika osayizi wokubala inthanethi
Amagilavu ​​Men sika ngobukhulu wokubala inthanethi
Amagilavu Men sika osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba uthole futhi ukuguqula Mens sika amagilavu ezinobukhulu ukuba osayizi international futhi isandla selilonke ngamasentimitha noma amayintshi.
Amagilavu ​​Men sika ngobukhulu wokubala inthanethi ikuvumela ukuba uthole futhi ukuguqula zamadoda amagilavu ​​ezinobukhulu ukuba osayizi international futhi isandla selilonke ngamasentimitha noma amayintshi. Ngokwesibonelo, ukuguqula amagilavu ​​osayizi for amadoda kusukela international esandleni selilonke ngamasentimitha ayishumi, noma kusuka esandleni selilonke kuya international. Futhi ungakwazi ukubona amagilavu ​​zabesilisa osayizi ishadi, ne osayizi ezinkulu nezincane.
International Hand selilonke (cm) Hand selilonke (amayintshi)
Bala usayizi omusha
Amagilavu ​​osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela amadoda nabesifazane sika amagilavu ​​ezinobukhulu ukuba osayizi international futhi isandla selilonke ngamasentimitha noma amayintshi.
Hat osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela hat osayizi kwamanye amazwe, like American (US / UK), isiRashiya, osayizi international, noma ikhanda selilonke ngamasentimitha noma amayintshi.
Amagilavu ​​for amadoda
Iqukethe amagilavu ​​amadoda ezinkulu nezincane sika osayizi ishadi emazweni ahlukene.